ह’स्तमै थुन गर्नुहुन्छ, भने कृ’पाय ‘ध्या’न दिएर पढ्नुहोस् ! - Samachar Post Dainik
ह’स्तमै थुन गर्नुहुन्छ, भने कृ’पाय ‘ध्या’न दिएर पढ्नुहोस् !
एजेन्सी- ह स्तमै’ थुन एउटा सा’ मान्य यौ न व्य वहार हो । तर यो अन्य यौ न व्य वहार भन्दा यसका रण फ रक छ कि अत्या धिक’ ह स्तमै थुन ग र्नाले श रीरमा’ मा नसिक तथा शा रिरीक असन्तुलन तथा अन्य सा इड इ फेक्ट निम्त्या उन सक्छ । तर’ यसको असर हरेक मानिसमा ‘फरक फरक हुन्छ । ‘त्यस ‘भए कति ‘पटक ह स्तमै थुन गर्दा अ त्या धि क हुन्छ त ? एक दिनमा २ अथवा २ भन्दा धेरै पटक ह स्तमै थुन ग र्नुलाई अ त्या धिक मा न्न सकिन्छ ।
अ धिकां श चि कित्स कहरु ह स्तमै थुन गर्ने अव धी लाई स केस म्म कम गर्न स ल्लाह’ ‘दिन्छन् । चिसो रुमाललाई बेडमा राख्नु – धेरैजसो श्रीमानहरु आफू नुहाइसकेपछि त्यसलाई सुकाउनुको सट्टा बेडमा नै छोड्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई चिसो रुमाल बेडमा राख्दा बेड चिसो हुने र रुमाल पनि बिस्तारै कालो हुँदै जाने कुरा थाहै छैन । श्रीमतीले धेरैपटक यसो नगर्न आग्रह गरेपनि उनीहर अर्को कानले उडाइदिन्छन् र भन्छन, ‘यो त आफसेआफ सुकिहाल्छ नी’।
***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
प्रकाशित मिति २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:३७